thinzar's blog: blog အတွက် comment tracking နဲ့ recent comment widget
၁။ www.haloscan.com ကိုသွားပြီး sign up လုပ်ပါ။ Login လုပ်ပြီးသွားရင် first page ပေါ်လာမယ်။ အဲဒီမှာ Install page ကိုသွားပါ။ Blogger or Blogspot ကို ရွေးပြီး Next ကို clickလုပ်ပါ။
၂။ ပြီးရင် အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့ page ကို ရောက်မယ်။ သူရေးပေးထားတဲ့ steps တွေအတိုင်း လိုက်လုပ်ပါ။
i. ကိုယ့်ရဲ့blogger account ကိုဝင်ပြီး template ကို download လုပ်ပါ။ (template tab -> Edit HTML -> click “Download Full Template”)
i. template နာမည်က template-123456789000876.xml ဆိုပြီး ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို halo scan က “upload your template here” ဆိုတဲ့ နေရာမှာ upload လုပ်လိုက်ပါ။ (ပုံ ၂ မှာပြထားတဲ့ page မှာ)
ii. halo scan က template ကို modify လုပ်ပြီး “Download New Template” ဆိုပြီး ပြန်ပေးလိမ့်မယ်။ Upload_this_to_Blogger.xml ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ ့ပါ။
iii. ကိုယ့်ရဲ့ blogger account ကို ပြန်ဝင်ပြီး upload ပြန်လုပ်ပါ။ (ပုံ ၃ မှာပြထားတဲ့ page မှာ Browse ကိုနှိပ်ပြီး အခုနက ဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားတဲ့ Upload_this_to_Blogger.xml နာမည်နဲ့ ဖိုင်ကို upload လုပ်ပါ။)
၃။ ဒီလိုဆိုရင် haloscan ကို install လုပ်လို့ ပြီးသွားပါပြီ။ (ဘလော့ဂ်ကိုကြည့်ပြီး နောင်တရသွားတယ်ဆိုရင်တော့ နဂို template အဟောင်းကို upload ပြန်လုပ်ပေါ့)
၄။ recent comment widget ထည့်ချင်ရင်
i. Members page ရဲ့ Recent Comments ရဲ့ အောက်နားမှာ “Put this widget on your site” ဆိုဒါကို click လုပ်ပါ။
မှတ်ချက်။ Haloscan သုံးလိုက်ရင် ကိုယ့်ရဲ ့ဘလော့ဂ်မှာ နဂိုရှိနေတဲ့ comment တွေအားလုံးပျောက်သွားမှာနော်။
P.S. steps တွေက blogging နဲ ့ရင်းနှီးသွားသူ တစ်ယောက်အတွက် အရမ်းလွယ်နိုင်ပေမယ့် newbies တွေအတွက် နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် အထောက်အကူ ရအောင်ပါ။ ကျွန်မလည်းသင်ယူနေဆဲ လေ့လာနေဆဲပါ။ လိုတာရှိရင် ဖြည့်ပေးကြပါ။
recent comment widget ကို ဒီအတိုင်း ထည့်ထားတော့ "#&xxx; #&xxx; ...." ဆိုပြီးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါကို မြန်မာလိုပေါ်အောင် ပြောင်းချင်ရင်
၁။ Haloscan account ထဲဝင်ပြီး Settings ကိုသွားပါ။
၂။ ပြီးရင် Advance setting အောက်က Character Encoding မှာ UTF-8 ကို ရွေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
haloscan လုပ်ကြည့်တာ နဂို comment တွေတင်မဟုတ်ဘူး နဂို ပိုစ့်တွေပါ ပျောက်သွားတာ ... ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင် .. အဲဒါ နောင်တရသွားလို့ ( ဘာလုပ်ရမှန်း မသိလို့ ) နဂို template ပြန်ရွေးထားလိုက်ရတယ် :D
4/9/07 11:38 AM
halo scan ထည့်တာ နဂိုပို့စ်တွေ မပျောက်ပါဘူး။ တစ်ခုခု မှားသွားတယ် ထင်တယ်။ ပထမ download လုပ်ထားတဲ့ တန်းပလိတ်ကိုဘဲ ပြန်ပြီး upload လုပ်လိုက်ပါ။ (halo scan က အသစ်မပေးခင် download လုပ်ထားတဲ့ template ရှိသေးတယ်မလား။) steps တွေကို ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ နဂို တန်းပလိတ်ကို save လုပ်ထားရင်တော့ ကြိုက်သလောက် စမ်းကြည့်လို့ ရတယ်လေ။ ဘေးကအပို ထည့်ထားတဲ့ widget တွေတော့ ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။